Translate Turkish to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Turkish to Myanmar (Burmese), Turkish to Myanmar (Burmese) translations, Turkish to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Merhaba nasılsın မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Kimse var mı? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Seni gerçekten çok seviyorum ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Bu hamburgerin fiyatı ne kadardır? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Bana taksi çağırır mısın? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Ben ilgileniyorum ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Uçuşum ertelendi အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Iş için buradayım ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Merhaba benim adım မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Üzgünüm ama evlendim ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Ben size sormak istiyorum ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Beni havaalanına götürür müsünüz? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Şu an saat kaç, lütfen? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
En yakın polis karakolu nerede? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Telefon şarj aletini alabilir miyim lütfen? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Bana yardımcı olabilir misiniz? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Bana bir içki ısmarla, lütfen? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Fiyatı ne kadar? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Gluten için alerjim var ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Doktor çağırın ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Doktor var mı? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Görüşebilir miyim? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Patronun lütfen. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Burası çok güzel ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Beni otele götür lütfen ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Oda numaram ne အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?